Dagaal goos goos ah oo saaka dib uga billowday Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal goos goos ah oo saaka dib uga billowday Guriceel
Kadib khasaarihii xoogganaa ee shalay ka dhashay dagaalkii kharaaraa ee Guriceel, labada dhinac ayaa mar kale u midiya sahanaya dagaal aan waxba la iskula harin sida ay caddeynayaan xogaha saaka ka imaanaya Galgaduud.
Guriceel, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, ayaa sheegaya in saaka uu mar kale dib u billowday dagaal u dhaxeeya Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug oo is-kaashanaya iyo koox diimeedka hubeysan ee ASWJ, oo shalay uu dagal kharaar ku dhex maray degmada.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen ilo warbaahin oo madax bannaan, kuna sugan magaalada, rasaas goos goos ah, ayaa hadda laga maqlayaa Labiga Qoryaha ilaa misjidka weyn ee Jaamaca oo ku yaalla bartamaha Guriceel.
Sida ilo kala duwan u xaqiijiyeen KON, ciidamada dowladda ayaa ku sugan Isgoyska Tuulo Gaban oo dhaca dhanka waqooyi ee magaaladda, saldhigga booliska, xarunta degmada, aagga Beder ilaa qabuuraha Guriceel, taas oo ka dhigan in wax ka badan kala bar magaalada ay gacanta ku hayaan CXDS.
Dhanka kale, Ciidanka taabacsan Ahlu-sunna, ayaa fariisimo xooggan ka sameystay Schoolka Al-ma'muun, Isbitaalka Istarliin ilaa halka loo yaqaan Jaamacadda oo dhacda bariga degmadda, waana dhul istaraatiiji ah oo guryaha dhagaxda ah ay aad ugu badan yihiin.
Ilaa hadda lama soo warin dagaal xooggan, waxaase la xaqiiqiyay maqalka rasaas teelteel ah oo labada daraf isku weydaarsanayaan aagga Masaajidka ugu weyn magaalada.
Ugu yaraan 20 qof oo u badan askar ayaa ku dhimatay dagaal saacado badan qaatay oo shalay oo Sabti ahayd ka dhacay degmada Guriceel.
Dadka lagu dilay dagaalka waxaa kamid ah taliyeyaal, uu ugu darajo sareeyo Gaashaanle C/ladhiif Fayle, kaasoo u dhintay dhaawac soo gaarey kadib markii Ahlu Sunna soo rogaal celis gabbal-dhicii shalay.
Guddoomiye ku xigeenka amniga Guriceel Cabdishakuur Axmed Faarax, oo dhawaan warbaahinta la hadlay, wuxuu sheegay in howl-galku galay maalintii labaad, wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay magaalada ka xaroodaan.
Ciidamada dowladdu waxa ay soo bandhigeen, maxaabiis ay ku sheegeen in ay ka tirsanaayeen kooxda SUFA, ee dagaalka ka dhanka ah dowladda Soomaaliya ka wadda Galgaduud.
Wararka Guriceel kala soco bogga wararka Keydmedia.net.